रातमा कुकुर किन धेरै भुक्छ ?
ramkrishna January 29, 2021	रातमा कुकुर किन धेरै भुक्छ ?
कुनै पनि प्राणीको पसिनाको गन्ध या बोल्ने उच्चारण यदि रातको सन्नाटामा कुकुरले महशुस गर्यो भने वातावारण शान्त भएको कारण तुरुन्तै उसको मस्तिष्क तन्त्रिकामा प्रभाव पार्छ । यहि गन्ध वा आवाज दिनको कोलाहलमा कुकुरले कम महशुस गर्छ । दिनमा सुर्यको प्रकासको कारण वातारण गर्मी हुन्छ । त्यसले जुनसुकै प्राणीको पसिनाको गन्ध पनि वाष्फित हुन्छ ।
रातमा सुर्यको प्रकाश नभएको कारण गन्ध वाष्फित हुन पाउदैन । यसकारण प्राणीहरुको गन्ध कुकुरले तुरुन्तै आफ्नो मस्तिष्कमा समाहित गर्छ । यसकारण कुकुर रातमा धेरै चनाखो हुन्छ र खस्र्याकखुस्रुक हुने बित्तिकै भुक्न थालिहाल्छ ।
Previous Previous post: गिजाबाट रगत आउने यस्तो छ कारण, यी हुन् निको पार्ने घरेलु उपाय
Next Next post: तपाईंको दाँत अनुसार तपाईं को भागय कस्तो हुन्छ हेर्नुस